पण्डित बाजेको लौरीको ‘चोली तुना’ गीत सार्वजनिक « Lokpath
पण्डित बाजेको लौरीको ‘चोली तुना’ गीत सार्वजनिक
काठमाडौं । चलचित्र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ को चोली तुना बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतलाई ‘ठमेल बजार’ की मीना निरौला र श्रीकृष्ण बम मल्लले स्वर दिएका छन् ।
त्यस्तै गीतलाई कृष्ण केसीले लेखेका हुन् भने गीतको भिडियोलाई विक्रम स्वाँरले कोरियोग्राफी गरेका हुन् ।
दीपक ओलीले निर्देशन गरेको फिल्म एक गाउँमा हुने पण्डितको कथामा निर्माण भएको छ । सार्वजनिक गीत रोमान्टिक छ भने गाउँले परिवेशलाई उतारिएको छ । भिडियोमा सन्ध्या केसी हाबी भएकी छिन् भने प्रविण खतिवडा, मरिष्का पोखरेल, विजय बराल, भोलाराज सापकोटा लगायतका कलाकारले पनि अभिनय गरेका छन् ।
यो फिल्मको कथा, पटकथा तथा संवाद महेश दवाडीले लेखेका हुन् । त्यस्तै फिल्मलाई थमन कुमार भण्डारीले फिल्ममा लगानी गरेका हुन् भने किशोर खड्का सह निर्माताका रुपमा रहेका छन् । त्यसतै फिल्ममा छायांकन विदुर पाण्डे र सम्पादन मित्र डी. गुरुङको रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,१७,बिहीवार १३:५९
काठमाडौं । लेखक तथा अभियान्ता तसलिमा नसरिन जहिल्यै आफ्नो बोलीका कारण चर्चामा हुन्छिन् । यसपटक उनले सरोगेसीलाई लिएर आफ्नो भनाइ
पुष्पाको सफलतापछि अल्लुले बढाए पारिश्रमिक, ‘पार्ट टु’मा कति लिँदै छन् ?
काठमाडौं । फिल्म ‘पुष्पा स् द राइज’ पछि अभिनेता अल्लु अर्जुन सफलताको अर्को सिँढीमा उक्लिएका छन् । यही कारण उनले
काठमाडौं । साउथ स्टार धनुष र उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकान्त हाल अलग्गिएको घोषणाले चर्चामा छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट आफूहरू
आइटम गीतमा कति पारिश्रमिक लिन्छन् बलिउड अभिनेत्री ?
काठमाडौं । फिल्ममा आइटम गीत निकै रुचाइने गरिएको छ । एक आइटम नम्बरका लागि अभिनेत्रीहरु करोडौं रुपैंयाँ पारिश्रमिक लिन्छन् ।